Madaxweyne Farmaajo oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garowe
GAROWE, Puntland - Wafdiga Madaxweynaha Somalia, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu soo dhaweeyay magaaladda Garowe, ee caasimadda Puntland maanta oo Sabti ah.
Madaxweynaha cusub ee Puntland, mudane Saciid Cabdullaahi Deni, mas'uuliyiin iyo dadweyne ayaa kusoo dhaweeyay Farmaajo Garoonka diyaaradaha magaaladda Garowe.
Isagoo garabkiisa fadhiyo Madaxweyne Deni, Farmaajo oo qeybta VIP-da ee Garoonka ku siiyay Warbaahinta ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida loo soo dhaweeyay, isagoo u mahadceliyay shacabka iyo dowladda Puntland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Puntland ay tahay hooyadda Federaalka Somalia, isagoo bogaadiyay doorashii Madaxweyne Saciid Deni ee 8-dii bishaan, taasoo u dhacday si xor iyo xalaal ah.
Munaasabadda Caleema-saarka Madaxweyne Deni ayaa lagu wadaa inay caawa ka dhacdo magaaladda Garowe, iyadoo ay ka qeybgalayaan madax kala duwan, oo ay kamid yihiin Madaxweyneyaashii hore, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif.
Wararkii ugu dambeeyay diyaar-garowga caleema-saarka Madaxweynaha Puntland
Puntland 26.01.2019. 10:39
CC Shakuur oo laga joojiyay Xaflad iyo eedeymo uu u jeediyay Farmaajo
Soomaliya 07.01.2019. 19:25